Ra’iisul Wasaare Saacid oo Baydhaba u tagey sida uu ka yeeli lahaa khilaafka Maamulka KMG ee Cabdi Hoosow oo 6dii bilood ay ka dhamaadey – idalenews.com
Ra’iisul Wasaare Saacid oo Baydhaba u tagey sida uu ka yeeli lahaa khilaafka Maamulka KMG ee Cabdi Hoosow oo 6dii bilood ay ka dhamaadey
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Cabdi Faarax Shirdoon Saacid iyo wafdi ballaaran oo uu hogaaminayo ayaa saaka soo gaaray magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay.
Ra’iisul Wasaaraha ayaa waxaa safarkiisa ku wehliya Wasiirka Gaashaandhiga Mudane Cabdixakiin Maxamuud X. Faqi, Wasiirka Ganacsiga Mudane Maxamed Axmad Xasan, Wasiirka kuxigeenka Wasaaradda Adeegga Bulshada Maxamuud Macalin Yaxye, Xildhibaano, Saraakiil iyo Malaaqyo.
Wasiirka Gaashaandhiga Mudane Faqi ayaa warbaahinta uga warbixiyay ujeedada safarka Ra’iisul Wasaaraha isaga oo sheegay in looga gol leeyahay sidii loola kulmi lahaa qeybaha kala duwan ee bulshada, gaar ahaana maamulka gobolka, Malaaqyada, ururada bulshada rayidka iyo saraakiisha ciidamada qalabka sida, iyadoo diirada la saari doono sidii amni loogu soo dabaali lahaa gobolada Bay iyo Bakool.
“Si gaar ah waxaan ugu kuurgali doonaa ammaanka iyo howlaha la dagaalanka iyo ciribtirka kooxaha nabadiidka ah ee Shabaab” ayuu yiri Faqi oo xusay in Ra’iisul Wasaaruhu uu kulamo horudhac ah la qaatay saraakiisha ciidanka, Maamulka gobolka iyo odayaasha iyo waxgaradka iyo sidoo kale Malaaqyada gobolka.
Safarka Ra’iisul Wasaaraha ayaa qeyb ka ah safaro uu horay ugu kala bixiyay gobolada dalka Soomaaliya, taasoo uu ugu kuurgalayay xaaladdaha dhabta ah ee bulshada ku dhaqan gobolada, isla markaana shacabka loo gaarsiiyo qorshayaasha dawladda.
Idale News Online, Mogadishu
Duulimaadkii ugu horeeyey ee Uganda Airline oo Muqdisho ka bilowday
Wareegii 2aad ee Wada hadalada Somalia iyo Somaliland oo Istanbul ka furmay